भरत घर पुग्दा रोकिएन आमा बुवाको आशु – पूर्वमा पारस बन्दा च्याब्रुङ देखी पञ्चे बाजाले स्वागत? (हेर्नुस् भिडियो सहित) - Nepali Janata Khabar
भरत घर पुग्दा रोकिएन आमा बुवाको आशु – पूर्वमा पारस बन्दा च्याब्रुङ देखी पञ्चे बाजाले स्वागत? (हेर्नुस् भिडियो सहित)
भरत घर पुग्दा रोकिएन आमा बुवाको आशु – पूर्वमा पारस बन्दा च्याब्रुङ देखी पञ्चे बाजाले स्वागत?
काठमान्डौ जिबेश पाण्डे एक कुसल र चर्चित पत्रकार हुन । उन्ले सामाजिक गतिबिधी लाई नियाल्ने काम गर्दछन ।
सधैं सत्य र न्यय को पक्ष मा बोल्ने कुस्लब केशी ले धेरै पीडितहरु लाई न्यय दिलाई सकेको छन ।
आज भने पत्रकार जिबेश पाण्डे ले नयाँ भिडियो लिएर आएको छन ।
प्रहरीद्वारा भारतीय मो’टरसाइकल सहित गा’जा प’क्राउ
कोरोनाले ठूला मन्दिर सञ्चालनमा समस्या ॐ‌ लेखी सेयर गर्नुस्